PetrPikora.com on Janoary 12, 2018
EMBA spol. S Ro dia orinasa tchika eo amin'ny sisintany eo anelanelan'ny Tendrombohitra Giant sy ny Tendrombohitra Jizera. Ny fiandohan'ny tantara tara taratasy Paseky nad Jizerou ny taona 1882, rehefa nisy rahalahy Rösslerovými nanorina ny orinasa ho an'ny tanana baoritra fotsy fonosana vokatra ho an'ny orinasa ny fitaratra ao amin'ny faritra Jablonec. Fa ny dingana manaraka rehetra eo amin'ny fiainana miavaka amin'ny fanitarana ny famokarana ny orinasa sy ny famokarana fandaharana toerana.
Zava-misy manan-danja eo amin'ny tantaran'ny fivarotana entana ny ankamaroan'ny fametrahana milina milina karatra amin'ny 1970 sy 1989 taona, izay nitondra fiovana lehibe teo amin'ny famokarana. Tamin'ny taompolo 1990 tamin'ny taonjato faha-20, teo ambanin'ny marika EMBA dia nanomboka ny fampivoarana ny sarimihetsika arivoarivo ho an'ny tahirin-tsakafo manontolo sy antontan-taratasy ara-kolontsaina sy ara-tantara. Tamin'ny taonarivo vaovao, ny portfolio'ny famokarana dia novolavolaina tamin'ny tsipika momba ny famokarana horonam-bokim-panjakana.
EMBA dia orinasa tseky manana fomba amam-panao lava sy tompon'andraikitra amin'ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana. Ny vokatra organika dia novolavolaina tamin'ny fanodinana taratasy ary azo havaozina tanteraka. Amin'ny alàlan'ny vokatra avy amin'ny EMBA dia manampy amin'ny fiarovana sy ny fiarovana ny lova ara-kolontsaina sy ara-tantara any amin'ny firenena maro. Amin'ny maha mpampiasa ny faritra misy azy, dia tompon'andraikitra amin'ny fampivelarana ny fepetra fiasana maharitra sy azo antoka ho an'ny mpiasany izy, ary koa ny fanoloran-tena handray anjara amin'ny fiaraha-monina sosialin'ny faritra manontolo.
Paseky nad Jizerou dia tanàna kely iray any amin'ny distrikan'i Semily, any amin'ny faritr'i Liberec, any amin'ny Tendrombohitra Giant tandrefana, eo amin'ny sisin-tanin'ny Tendrombohitra Jizera, eo ankavanan'ny Jizera Mine. Mipetraka eto ny mponin'i 252; trano sy tranobe maro no manompo androany amin'ny fialan-tsasatra. Ny faritr'ora dia GMT -5. Jereo koa Etazonia Rohy ivelany Nuvola apps ksig.png Mbola ambangovangony ity lahatsoratra ity ary tokony hofenoina. Azonao atao ny mandray anjara eto amin'ny Wikipedia amin'ny alàlan'ny fanitarana azy.
Ny filazana voalohany momba ny tanàna dia avy amin'ny 1713.
Ny tanàna dia azo inoana fa nifototra tamin'ny 16. Na izany aza, ny rakitsary voalohany dia avy amin'ny 1654. Ny ampahany tranainy indrindra dia i Makov, izay nisy ny fantsomailina tamin'izany fotoana izany, ary ny Havírna, izay nanamboarana volafotsy. Rehefa nandeha ny fotoana, dia nandao ny asan'ny olombelona ny ala, ary nisy tranokely vaovao niseho tao anatin'io famoretana vaovao io, izay ny mponina ihany, raha ny marina, ny mpanenona. Ny vato avy any amin'ny faritra rakotry ny ala dia mifantoka amin'ny anton-doha maherin'ny anio.
Ao 1789 naorina ny fiangonana isan-taona i Pasekách 1791 nanomboka fianarana tsy tapaka. Nampianatra sekoly teo an-toerana revivalists-pirenena, Cantor Josef Simunek sy ny mpanampy Věnceslav Metelka izay lasa mpanan-karena initiators ny mozika, teatra, literatiora sy ny fiainana ara-kolontsaina ankapobeny ny tanàna. Věnceslav Metelka toy ny autodidact nanofana mpanao lokanga sy nanorina ny razana lokanga fanaovana fomba amam-panao, izay nisongadina ilay antsoina hoe Giant lokanga sekoly, nefa miaina ao amin'ny tontolo iray genera Pilar Špidlen sy Vedral. Taorian'ny Ady Lehibe II tamin'ny fotoana mozika animation fomban-drazana Pasecký mpampianatra lokanga Vedral František, nefa tara dimam-polo miaramila iray toko sy mpankafy teatra nanjavona. Tamin'ny taona 1970 20. Niasa tao amin'ny tanàna sy ny fiangonan'i St. Vaclav Pater MUDr. Ladislav Kubíček. Ao amin'ny 1980 no nanorina ny Fiangonan'i St Wenceslas mpihira amboarampeo Society, izay ankehitriny dia manana ny 30 mpikambana isan-taona nanomboka tamin'ny 1990 Paseky mandrindra mozika fety; Ny orkestra ny amboarampeo dia manatontosa mpiangaly mozika matihanina.
Ny tanàna no sehatr'ilay tantara noforonina nataon'i Karel Vaclav Raise Zapadlí vlastenci. Ny teti-dratsiny dia napetraka ao amin'ny 40. flight 19. taona ary Paseky dia nanjary nantsoina hoe Pozd'in, Rais dia manisy tsindrim-peo ny fahatsiarovan'i Metel, asa mendri-panazongozonan'ny vahoaka.
Ny fandrosoana lehibe indrindra dia Paseky tao amin'ny 1869, raha voasoratra anarana ao amin'ny 212 miaraka amin'ny isa voatokana sy ny mponina 1710. Avy eo dia nody tsimoramora ilay tanàna. Na dia teo amin'ny ankapobeny fotsiny aza ireo tanàna kelin'i Pasek, dia nampidirina tao Alemaina ny fifanarahana tamin'i Munich. Na dia tsy nanohina mivantana ny fandroahana ny Alemana aza ny mponin'i Pasek, dia nisy ny fihenan'ny vahoaka be ary ny ankamaroan'ny trano fonenana dia novidin'ireo mpanao vakansy. Ny fiotazana tany amin'ny toeram-pambolena sy ny toeram-pambolena dia simba noho ny famolavolana mavesatra, ary tsy noraharahiana. Tao amin'ny 1979, nofoanana ny sekoly tao Paseky.
Foibe an-drenivohitra: trano fisakafoanana havia sy fisotroan-dronono Na Buďárce, biraon'ny paositra ary biraom-panjakana Ny ankavanana dia ny Fahatsiarovana ireo mpioko tia tanindrazana ao amin'ny fiangonana teo aloha, ao ambadiky ny St. Wenceslas Church.
Sokol fanatanjahan-tena Club dia naorina teo an Pasekách 1896. Tamin'ny taona 1936-1938 niaraka družebního ambany nanorina Sokol Sokol, izay taorian'ny ady an-toerana lasa foibe ara-kolontsaina. Nisy teatra voajanahary natsangana tao anaty ala tao amin'ny Sokol House. Ny fahatanterahan 'ny fiaraha-mientana no voalohany sy farany fanontana ny isan-kerinandro sy ny tantara tsangana fetiben'ny mozika in Paseckého 1952, taorian'ny fitondrana kominista asa Sokol nijanona ary nisy nihena ny fiaraha-monina ankapobeny ny fiainana. Sokol ilay voadio teo 1967 rehefa Nanofa ny tafika Tsekoslovakia. Amin'izao fotoana izao (2008) dia eo an-toerana ny 100 TJ Sokol mpikambana sy efaha amin'ny fanatanjahan-tena, mozika sy ny fizahan-tany ny asa, ny fahavaratra nikarakara ankizy toby, dia mandray anjara amin'ny fanadiovana ny tanàna sy ny sisa.
Hatramin'ny 1888 any Paseky, nisy mpirotsaka an-tsitrapo ihany koa. Taloha, nandamina baolina ny mpihaza teo an-toerana ary nilalao teatra tao amin'ny U Soukupu Pub, taty aoriana tao amin'ny Houslairs Inn. Tao amin'ny 1931, ny brigade dia nanao biriky hafa avy tany Havirna.
Fanampin'izany, nanomboka tamin'ny taona 2010, ny fikambanana civic Paseky outdoor os dia mavitrika ao an-tanàna, izay mandrindra ny fanatanjahan-tena sy ny hetsika ara-kolontsaina eo an-toerana.
Ny 1976 ka hatramin'ny 1990, Paseka dia tsy vondrona samihafa fa ampahany amin'izany Rokytnice. Tao amin'ny 1991, Paseky dia nanao sonia ny Fandaharan'asa momba ny Famerenam-bidy any ambanivohitra ary ao anatin'ity fandaharanasa ity ny drafitry ny faritry ny Sampan-draharahan'ny Sazy Paseky nad Jizerou.
Ao an-tanàna dia misy kitapo FUKNER sro, mpamokatra karatra sy karatra fonosana EMBA sro sy toeram-piompiana ondry Zvonice.
Ny tantara eo an-toerana dia natokana ho an'ny tranon'ny Museum of Zapadly patriarika ao amin'ny fanorenana fiangonana paroasy teo aloha, akaikin'ny St. Wenceslas Church ary manerana ny restaurant Na Buďárce. Ny tranombakoka dia natokana amin'ny asan'ny violinista sy ny mpanoratra Věnceslav Metelka ary ny mpanoratra Karl Vaclav Rais, ny fiainan'ireo havoana eo an-toerana ao 19. taon-jato, violon ary fitaratra. Ny fahatsiarovana dia napetraka tao amin'ny 1958 tao amin'ny rihana tany amin'ny paroasy, ny taona 1975 dia navaozina araka ny tranga PhDr. Jaromir Jech, manam-pahaizana sady mpitory ny asan'i Metelka. 1978 dia natsangana tany amin'ny rihana ambony. Ny Museum dia eo ambany fitantanana ny Valan-javaboarin'i Krkonoše.
Ny tanàna dia vondron'olona maromaro ary tranobongo maromaro maromaro no miparitaka manerana ny havoana. Ny kaominina iray manontolo dia ahitana faritra iray ao Cadastral. Ny singa fametrahana fototra dia voasoratra ara-dalàna ao amin'ny kaominina telo: Paseky nad Jizerou-Havírna dia Makov. Havírna ny esory ponenana tao an-dohasaha Havírenského mivantana atsimo Hromovka ambony avaratra ambony Mechovice (803 m), ary ahitana ny toerana fonenana toy ny tendrombohitra, Piave, Lomička, sns Makov maina ny ponenana tany amin'ny faritra atsimon'i ny kaominina an-dohasaha Makovsky Stream. Avaratrandrefan'i ampahany amin'ny tanàna, ary maro Ski manandratra sy ny any ambodin'ny tendrombohitra atao hoe Hořensko, vondrona tranonareo amin'ny ilany atsinanana amin'ny tendrombohitra Javorníka (822 m) Antsoina hoe Tomšová. Rehefa akaiky ny lalana dia mijoro fahiny Tomšová Pub na ny vakana Prdku. Ny tanàna dia ahitana ny faritra ala (ala kesika ny ankamaroany) avaratry ny harena ankibon'ny tany, miaraka amin'ny havoana Hromovka (916 m) White Rock (akaikin'ny ambony 957 M, toerana nisy ny tanàna manome 964 m) sy Kapradník (910 m) sy ponenana Zabyly ao Jizera dohasaha. Teboka ambany indrindra tao an-tanàna dia ny ambaratonga Jizera 476 M
Ny tanàna dia mifanakaiky ny andrefana sy ny kaominina Zlata Olesnice sy ny fakany (l. U. Rejdice, Dul sy Polubný) avaratrandrefan'i faritra tao an-tanàna Jizerou Harrachov, eo amin'ny atsinanana koa tahaka ny faritanin'i Jizerou Rokytnice (Dolní Rokytnice), any atsimo miaraka amin'ny faritanin'ny tanànan'i Vysoké nad Jizerou (akaikin'i Sklenařice) sy ny tanàna Jablonec nad Jizerou.
4Karchivingarchivboxdji mavicdrônadrônaEMBAEMBA spol. S Romalama baoritraJizerkyGiant MountainsMountainskvadroptérafunicularbaoritraLysa horatia manao ski ambonyMavicfijanonanatoeranaclearingsPaseky nad Jizerouphantomphantom 3phantom 4PoloninampamehyRokytniceSki ala neninaskipaszavatra ilainaVilemovvohavohafamokarana ny baoritraavy any ambony
9 famantaranandro lasa izay